Wasaaradda Maaliyadda Somalia oo Musuq Maasuq Hareeyay. – Hornafrik Media Network
Wasaaradda Maaliyadda Somalia oo Musuq Maasuq Hareeyay.
By HornAfrik	 On Jul 6, 2017
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Hornafrik u sheegey in wasaaradda Maalyadda Soomaaliya ay haraysay wax is dabarin tii ugu weyneyd abid kadib markii daqligii lagu shubey qasnadda dowladda kala bar la waayey.
Arintaan ayaa soo shaac baxdey kadib markii kulan golaha wasiiradda ay yeesheen dhamaadkii bishii hore wasaaraddu soo bandhigtey warbixin ku saabsan daqliga ay soo xareeyeen hay’adaha dowladda, taasoo markii la dhagaystay ay soo baxday inay ka maqan tahay Qasnadda Dawladda Lacag dhan Toban Milyan oo Doolar oo aan la ogayn halka ay ku baxday.
Xogta la helay ayaa muujinaysa in Lacagtan uu Musuqmaasuqay Agaasimaha Waaxda Dakhliyadda ee Wasaaradda Maaliyadda, Jacfar oo ka dhaadhiciyay Wasiirka Wasaaradda inay arrintan tahay Fursad ay ku samayn karaan Dhaqaale badan iyada oo aan la ogaan.
Warbixinta ka dib ayaa kulanka golaha wasiirada waxaa ka dhex bilaabatey dood iyo buuq ka dhashey warbixinta iyadoo wasaarado badana ay ku doodeen in laga been sheegayo daqliga dowladda. isla markaana wasaaraduhu ay bilaabeen inay soo bandhigaan daqliga runta ah ee la soo xareeyey.
Shirka ayaa intaas ka dib lagu kala dareerey iyada oo eedeyn dusha looga tuurey wasaaradda isla markaana wasiirku ku inkirey agaasimaha inuu wax la ogaa.
Agaasimaha daqliyada Jacfar oo ay Qaraabo dhaw yihiin Raiisul Wasaare Khayre ayaa ah Shaqsi lagu yaqaano wax is dabaris iyo leexsashada daqliga, iyo weliba in la tirtiro xisaabaadka dowladda. Waxaana hadda Jacfar ku socota Baaris. iyadoona Wasiirka Maaliyadda uu doonayo in la qariyo Musuqa dhacay oo aan la ogaan Lacagaha maqan.
Xisaabiyaha Guud oo ay Hornafrik la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo. Wuxuuna sheegay inuusan doonayn in Baarista uu ka hor dhaco.
Warar ay heshay Hornafrik na waxay sheegayaan in Qaar ka mida Lacagahan laga soo celiyay Xisaabaad Banki oo uu Jacfar ku leeyahay Bankiyo Gaar loo leeyahay.
Ma Cadda Go’aanka laga qaadan doono Wasiirka Maaliyadda iyo Agaasimaha Waaxda Dakhliyadda oo ay ku soo baxday Musuq Maasuq xoogan iyo wax is daba marin.
Riisalwasaaraha dowladda ayaa aad uga niyad jabsan musuqqa ka dhex jira wasaaradda maalyadda iyada oo wasiirka maalyaddu uu maalin kasta ka been sheego daqliyada. Arintaan ayaa kala shaki ka dhex abuurtey hay’adaha dowladda. waxaana xayiran daqliyadii lagu shubi lahaa qasnadda dowladda oo noqotey gacan aan wax lagu aamini karin.
Hay’adaha dowladda ayaa bilaabey iney lacagaha ay soo xareeyaan ku wareejiyaan Riisalwasaaraha xukuumadda maadaama la aamini waayey qasnadda dowladda.
Xukuumadda uu hogaamiyo Raiisul Wasaare Khayre ayaa horay u sheegtay inay la dagaalamayso Musuq Maasuqa, Isla markaana ay doonayso inay Dalka gaarsiiso Marxalad ay Hay’adaha Dawladdu nadiif ka noqdaan Musuq Maasuqa.
Hadda: Ciidanka Madaxtooyadda oo Dhaawacay Wariye ka tirsan Radio Muqdisho.
Maamulka Beerta Nabadda oo iska diiday Amarka Gobalka Banadir,? Maxaase looga hadli waayay Lacagta lagu qaado Isbitaalka Digfeer,?